XOG:- Qorsha Cusub Ee Xasan Kheyre Dab iyo basiin loo dhaweyay miyuu kaga dhiganyahy midka Madaxweyne Farmaajo 2020 ? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 5 February 2019
Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa laga yaaba sida ay sheegayan warar kala duwan oo soo baxaya inuu dhabarka ka toogto Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo ahaa ninkii Soomaalida baray Xasan Cali Kheyre oo dad yar ku yaqiinay inuu ahaa dalaal arrimaha shidaalka iyo Hayádda Samafalka Norwegian refugee Council.
Inta badan dadka waxay ku barteen arrimaha shidaalka iyo inuu aad ugu dhawaa Madaxweynihii Hore Xasan Sheekh Maxamud , wuxuuna ka dhigtay wiilkiisa aad ayuuna u aaminay , isagaa ahaa madaxa ololaha doorashadii loogu adkaaday bishii Feberayo 2017 oo ku guuleystay Farmaajo, hase yeeshe dhurwaa ayuu ku noqday.
Waa nin dantiisa aad u yaqaana, waa nin qosol been ah iyo hadalo aan qalbiga jirin madaxda ku beelaxawsada,wax kastana wuu sameyna si yoolkiisa u gaaro.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa wado qorshe Xisbigiisa gaarka ah ay kaga soo muuqanayaan Xildhibaano saameyn ku leh Soomaaliya iyo Masuuliyiin xilal hore usoo .
Xasan Cali Kheyre ayaa kulan la qaatay shalay Guddi uu u saaray Abaabulka iyo isku duba ridka Xisbiga Ra’iisul wasaaraha, sida uu inoo sheegay Sarkaal ka tirsan Xafiiska Ra’iisul wasaaraha.
Xasan Cali Kheyre ayaa sheegay in afarta sano beesha Daarood Madaxtinimada dalka dhamaatay haatan ay tahay fursad beesha Hawiye isagana yahay midka ugu haboon ee haysta dhaqaale iyo awod ku maareyn karo doorashadiisa.
Farmaajo ayaa isna ku doodaya in guddiga ololaha doorashada Guddoomiye ugu dhigto Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre taa bedelkeeduna Kheyre mar kale heli doono jagada Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya waa sida uu qorsheeyay Farmaajo.
Kheyre wuxuu caan ku yahay in dhabar toogasho iyo qiyaano siyaasadeed, isagoo habeenkiina la fadhiyay Xasan Sheekh ayuu subaxiina lacag ku wareejiyay Farmaajo, waana nin labada dhinaca xariif ku ah.
Kheyre waxaa uu bilaabay inuu yiraahdo Xildhibaano ka soo jeeda koonfurgalbeed waxaan idinka bedelayaa Malaaq-yada , keensada Malaaqyo cusub laakiin bil shardi waxay tahay codka aniga ayaa i siinaysaan aniga Xildhibaan ayaa idinka soo dhigayaa.
Sidoo kale waxaa uu la kulmay Xildhibaano Hawiye ah isagoo fursada jirta u soo bandhigay, dadaal badan ayuu wadaa laakiin lama oga inuu hamigiisa markan ku guuleysan doono iyo in kale.
Sidoo kale Kheyre ayaa damacsan inuu heshiisyo Siyaasadeed oo Farmaajo ogeyn la galo Kenya si uu dhaqaale u helo, kenya ayaa u aragta Farmaajo nin u jeer jeera dhanka Itoobiya iyo Ereteriya sidaas darteedna waxay doonaysa inay Kheyre ka dhigto midka ay dhabarka kaga istaajinayso Farmaajo.
Al shabaab Oo Shegay Arin ay la wadaageen Paul Anthony ka hor inta ayna dilin !